ငါးဆန်လှော်ဟင်း easy cook | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ငါးဆန်လှော်ဟင်း easy cook
ငါးဆန်လှော်ဟင်း easy cook
Posted by weiwei on Jul 31, 2012 in Food, Drink & Recipes | 22 comments
wei's cook ဆန္ေလွာ္ဟင္း
အခုတလော ရာသီဥတုက မိုးအေးအေးလေးမို့ ဟင်းရည်ပူပူလေး သောက်ရတာ ခံတွင်းတွေ့တဲ့ ရာသီဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးထဲမှာလဲ ငါးတွေ ပေါနေချိန်မို့ ငါးဆန်လှော်ဟင်း ချက်သောက်ရတာ အဆင်ပြေလို့ ကျွန်မ ချက်စားဖြစ်တဲ့ ငါးခူ ဆန်လှော်ဟင်းကို ချက်ပြလိုက်တယ်နော် …
ဆန်လှော်ဟင်းချက်ဖို့ ဆန်ကို ကိုယ်တိုင်လှော်ပြီး မညက်တညက်ကြိတ်ပါတယ်။ အရသာပိုကောင်းစေဖို့အတွက် ကျွန်မကတော့ ရှမ်းဆန်ကိုသုံးလိုက်တယ်။ ရှမ်းဆန် နို့ဆီဗူးတစ်ဝက်ခန့်ကို အရောင်ရဲလာသည်အထိ မီးအေးအေးနဲ့ စိတ်ရှည်ရှည်လှော်ပါတယ်။ ပြီးနောက် အမှုန့်ကြိတ်စက် သို့မဟုတ် ငရုတ်ဆုံထဲထည့်ပြီး ထောင်းရပါမယ်။ ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်ထားတဲ့အိုးထဲကို ဆန်ထောင်းပြီးသားထည့်ပြီး ပြုတ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ စပါးလင်၊ ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူကို ထောင်းတယ်။ ငါးခူအကောင်သေးသေး ၁၅ ကျပ်သားလောက်ကို သေချာသန့်ရှင်းအောင် ဆေးကြောပြီး ဆား ဆနွင်းနဲ့ ငံပြာရည်အနဲငယ်တို့ဖြင့် နယ်ထားပါမယ်။ စပါးလင်း ဂျင်း ကြက်သွန်ဖြူထောင်းထားတာကို ဆီအနဲငယ်ဖြင့် မွှေးနေအောင် ဆီသတ်ပြီး ငါးကိုအကောင်လိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဆန်လှော်ပြုတ်အိုး ပွလာတဲ့အခါမှာ ငါးဆီသတ်တာထည့်ပြီး အပေါ့ အငံ အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပါတယ်။ သိပ်မချိုဘူးထင်ရင် ခနောကြက်သားမှုန့် နဲနဲထည့်ရပါမယ်။ ကြက်သွန်နီအသေးလေးတွေကို လေးစိတ်ကွဲလှီးထည့်ပြီး သောက်ခါနီးမှာ ငရုတ်ကောင်းခပ်ပြီး သောက်နိုင်ပါတယ် …
ဆန်လှော်ကြောင့် ဆန်ပြုတ်လိုအရသာရယ်၊ စပါးလင်ဂျင်းတွေကြောင့် မုန့်ဟင်းခါးလို အနံ့ရယ်ကြောင့် မိုးအေးအေးမှာ အလွန်သောက်လို့ကောင်းပါကြောင်း …..
တရုတ်ပြည်မှာ နေခဲ့တုန်းက စားပွဲတစ်ခုမှာ ငါးခူအကောင်သေးတွေကို အကောင်လိုက်ထည့်ပြီး ကောက်ညှင်းနဲ့ပြုတ်တဲ့ ကောက်ညှင်းဆန်ပြုတ်ကို အမှတ်တရ မှီငြမ်းပြီး တီထွင်ချက်ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်တွေက ကောက်ညှင်းပေါင်းပြီးသားကို အခြောက်လှမ်းပြီး အဲဒီကောက်ညှင်းအခြောက်ကို ပြန်ပြုတ်ပြီးချက်ပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာ စပါးလင်မရှိလို့ ဂျင်းကိုပဲ အဓိထားသုံးပါတယ် .. လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ငါးနဲ့ ကာက်ညှင်းရဲ့အချိုဓါတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တာ တကယ်သောက်လို့ကောင်းပါတယ် …
ကျွန်မကတော့ မြန်မာစတိုင်ပြောင်းပြီး စမ်းသပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ..
ma me kyaw says:
တို့တော့ ထောငိးထားတဲ့အမယ်တွေကို. ကျောခွဲထားတဲ့ငါးထဲကိုထဲ့တယ်. ငါးကိုဆိသတ်ပိးရေထဲ့တယ်
မမဝေရှင့်…တကယ့်ကို easy cook ပါပဲ.. ကျမကတော့စားတာဝါသနာပါပြီး မတီထွင်တတ်တော့သူများနည်းတွေ အကုန်ကူးထားတယ်..အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ချက်စားဖြစ်တယ်…ငါးဆန်လှော်ဟင်းလေးအတွက်လည်းကျေးဇူးပါ.
ရှမ်းဆေးခါးမှုန့်ခတ်တာနဲ့မခတ်တာဘဲကွာတယ် အိမ်မှာတော ့အလွယ်ရတဲ ့ဆန်ဘဲထောင်း
တို့တော့ ထောငိးထားတဲ့အမယ်တွေကို. ကျောခွဲထားတဲ့ငါးထဲကိုထဲ့တယ်. ရေထဲ့တယ်
မမဝေရေ .. ကျေးဇူးပါ
ဒီဟင်းတစ်မျိုးထဲအတွက်မဟုတ်ဘူးနော် .. ဒီရက်ပိုင်းအချိန်တွေရနေတာနဲ့
မမဝေရဲ့ အီးဇီးကွတ်ခ်မီနူးတွေ ပြန်ရှာပြီးလုပ်စားနေတာ
အဖေတို ့ရဲ ့ရိုးရာဟင်းရေသောက်လေးကိုသတိပြန်ရမိတယ်။
ပြုတ်ပြီးသားကိုလေးထောင့်အတုံးလေးတွေတုံးပြီး၊ဂျင်း၊ကြက်သွန်ဖြူတို ့နဲ ့မွှေးအောင်ဆီသတ်ပြီး၊
မိုးအေးအေးနဲ ့သောက်လို ့ကကောင်းသလိုပါဘဲ။
မွန်မွန်လေ အဖေ့အလွမ်းပြေ ကဗျာရေးနေရင်းနဲ့ အဖေချက်ကျွေးတဲ့ ဆန်လှော်ဟင်းကို သတိရနေတာ…
ပို့စ်တင်မယ်ဆိုပြီး ဂေဇက်ကိုဖွင့်လိုက်ရော အစ်မရဲ့ ပို့စ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မ..မွန်မွန်က ကြိုက်သာကြိုက်တာ မချက်တတ်ဘူး။ အခုတော့ ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်…
ဆန်လှော်ဟင်းအရည်သောက်ဆိုလျှင် … ပုစွန်ဆန်လှော်ဟင်းပဲ ချက်လို့ ရတယ်မှတ်တာ ……. ။
ငါးနဲ့လည်း ချက်လို့ ရတာကိုး ……. ။ အိမ်မှာချက်တဲ့ ဆန်လှော်ဟင်းချိုကတော့ .. ဆီသတ်တဲ့အခါ … ဆီကို အိုးကပ်တယ်ဆိုရုံလောက်ပဲသုံးတယ် …. ။ ကိုယ်တိုင်တော့ တခါမှ မလုပ်စားဘူး ……။အိမ်က ဘယ်သူပဲ ချက်ချက် … အရမ်းကောင်းတာပဲလို့ ပြောပြောပြီး …..ညာစားဖြစ်တယ် … ဟီး
အခုလို လူတပိုင်းပြိတ္တာတပိုင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန် …. ၊ စားစရာပုံလေးတွေမြင်တိုင်းသွားရည်ကျရုံပဲ ကျရရှာတာ …. ….. ဪ … ဘွ .. ဘွ .. (မူရင်း- ကိုဂီ )
ဆီသတ်တာ ဆီနဲနဲများသွားပါတယ် … ဆီအိုးကပ်ရုံလောက်နဲ့ ဆီသတ်ရင် ပိုကောင်းမှာ …
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ငါးမကြိုက်လို့ ငါးနဲ့ချက်သမျှဟင်း တစ်ခုမှ မစားခဲ့ဘူး … ဆန်လှော်ဟင်းဆိုရင်လဲ ပုဇွန်နဲ့ပဲ ချက်စားတယ် ..
အခုအသက်နဲနဲရလာတော့ ငါးဓါတ်လိုအပ်လာတာမို့လို့ စမ်းပြီးစားရင်းကနေ အခုငါးကို တော်တော်လေးစားနိုင်လာပြီ …
ငါးခူကိုမုန်းတယ် ငါးဆိုကြိုက်ကိုမကြိုက်တာ မမအိတုံပြောသလိုမျိုး ပုစွန် ဆန်လှော်ဟင်းစားရရင်သိပ်ကောင်းမှာဘဲ ။ မမအိ လိုလေးဘဲလေသံပေးပြီးစားရတာ ကောင်းတယ် မမအိရဲ့ ညီမလေးလည်းအဲ့တိုင်းဘဲ အိမ်ကဘာမုန့်လုပ်စားစားညီမလေး အမေ့လက်ရာကကောင်းတယ် ဆိုပြီးညာပြီးဘဲ စားတက်တယ် ခုချိန် ထိ ဘာမုန့်မှလည်း မလုပ်တက်ဘူး မိဘလုပ်ကျွေးတာ ဘဲ ထိုင်စားနေတာ။
စနိုးရေ .. ညာဝါးတဲ့ လူအချင်းချင်း လာတွေ့နေပြီ ….. ။
အစ်မက ဆယ်တန်းလောက်ကတည်းက ထမင်းဟင်းချက်တာတွေနဲ့ ၊ မုန့်လုပ်တာတွေကို အိမ်က အဒေါ်တွေနဲ့ ကူချက်ရင်း ချက်တတ်ခဲ့ပေမယ့် ….. ဟုတ်တိပက်တိ ဘာမှ မလုပ်ချင်ပဲ အပျင်းထူနေတာ …. ။ တနင်္ဂနွေလေးရုံးပိတ်တာ …. ထမင်းဟင်းထမချက်ချင်ဘူး … အသားကုန်အိပ်ချင်တာပေါ့နော် … ဒါကြောင့် ညာဝါးနေတာ
ဆန်လှော်ဟင်းက ပိုသေချာ ပိုလွယ်ပြီး ပိုစား(သောက်)လို့ကောင်းတယ်…။
ဒါကြောင့် အရင်တုန်းကဆို အိမ်တော်တော်များများမှာ ဆန်လှော်ဟင်းချက်စားကြတာတွေ့ရတယ်။
ဆန်လှော်ဟင်းကို ငါးရံ့နဲ့ပဲစားဖူးတယ် နောက်ပြီးတစ်ခါမှလဲ ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဖူးသေးဘူး
မဝေကျေးဇူးနဲ့ ဒီတစ်ခါ အချိန်ရရင် ကိုယ်တိုင်လုပ်စားကြည့်ဦးမယ် ….
ဝေဝေရေ- မျှော်တုန်းမျှော်ဆဲ ပေါ်လာလို့ ဝမ်းသာသွားတယ်။
လာမယ့် လပြည့်နေ့ကျရင် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်မှာကို ဆရာတော်က သတ်သတ်လွတ်စားတယ်ဆိုလို့ အာလူးချောင်းချဉ်စပ်ချက်နည်း ပြန်ရှာချင်လို့ ရွာထဲဝင်အလာ ပိုစ့်အဟောင်းမို့ မနည်းရှာရမယ်ဆိုပြီး စိတ်ညစ်နေတာ။
အခုပိုစ့်လေးတွေ့လို့ ဝင်လိုက်တော့ အာလူးချောင်းချဉ်စပ်နဲ့ တန်းတိုးတော့တာပဲ။ [:)]
နွယ်ပင်ပြောသလိုပဲ ငါးခူဆန်လှော်ဟင်းနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ငါးရံ့ဆန်ပြုတ်တော့ စားဖူးတယ်။
ဝေဝေ ချက်သလောက်တော့ နည်းမကျဘူးပေ့ါ။
ပိတ်ရက်မှာ ချက်စားကြည့်လိုက်အုံးမယ်။ [:)]
ရာသီအေးအေး မှာ အင်မတန် သောက်ကောင်း မှာ။
ဒီမှာတော့ ငါးကောင်းကောင်း မရှိ ပေမဲ့ စားချင်စဖွယ်မှာ ချက်ရတာလဲ လွယ်လို့ ကြက်သား နဲ့ ချက်ကြည့်မယ်။
ဝေဝေ စာတွေကို ပြန်တွေ့ရတာ အရမ်းဝမ်းသာတယ်။
ကျောင်းတုန်းက အကြောင်းတွေ ရေးမယ်ပြောပြီး ဟင်းချက်နည်း နဲ့ အစားထိုးလို့ တော့ မရဘူးဟေ့။
ဟင်းချက်နည်းရော၊ အလွမ်းတွေ ကိုပါ မျှော်နေတာနော်။
မဝေ ဆောင်းတွင်းဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်။.
အဲဒီ ဟင်းလေးလည်း ကောင်းတယ်။
ငါးဖယ် ရေချိုဟင်းလည်း အဲလိုနည်းနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပဲ..
ငါးဖယ် တွေ ကို ဆီ နဲ့ တင်းယုံ ကြော်ပြီးတော့ စောစောက ပြောတဲ့ စပါးလင် နဲ့ ဆန်လှော် (ဆန်လှော် အလုပ်ရှုပ်လို့ ထမင်းထည့်တယ်)
အရသာ သိပ်မကွာဘူး ထင်တယ်။
လွယ်လွယ်လေးပဲ မဝေ ။ ကျမအခု မီးဖိုချောင်ဝင်နေရပြီမို့ နည်းနည်းစမ်းကြည့်အုန်းမယ်။
အထင်တော့ မကြီးပါနဲ့ မဝေရေ ။ ကျမက အဖြစ်လောက်ချက်တတ်တာပါ။ မဖြစ်မနေမို့သာ ။